कहिले पुग्लान् वेहुला ? नारायणघाट मुग्लिङ सडकखण्डको पहिरोले वेहुली लिन हिँडेका वेहुला अलपत्रपरेपछि…. – Classic Khabar
कहिले पुग्लान् वेहुला ? नारायणघाट मुग्लिङ सडकखण्डको पहिरोले वेहुली लिन हिँडेका वेहुला अलपत्रपरेपछि….
July 3, 2021 136
सामाजिक सञ्जालमा अहिले एउटा तस्बिर भाइरल भएको छ । नारायणघाट–मुग्लिङ सडक खण्डमा पहिरो गएको बेलामा जाममा परेका बेहुलाहरुको सामुहिक तस्बिर भाइरल भएको हो । पहिरोले सडक अवरुद्ध पारेपछि बिहे गर्न हिँडेका जन्ती सहितका बेहुलाहरु अलपत्र परे पछि समय ब्यतित गर्न तस्बिर खिचेको हुनसक्छ ।
सो तस्बिर अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको हो । उक्त सडकखण्डमा अलपत्र परेका बेहुलाहरुको सामूहिक फोटो सामाजिक संजालमा भाइरल भएको छ । महामारीका कारण सरकारले निषेधाज्ञा लगाएकोले विवाह जस्ता सांस्कृतिक कार्यक्रम धेरै रोकिएका छन् । केही दिन अघि मात्र काठमाडौ उपत्यकामा निषेधाज्ञा केही खुकुलो बनाइएको छ ।
निषेधाज्ञा खुलेका बेला असार १८ गतेको लगनमा वेहुली लिन हिँडेका वेहुलालाई पहिरोले विचवाटोमै अलपत्र पारेको हो । बुधवार देखि परेको वर्षाले सो सडकखण्डको धेरै स्थानमा पहिरो गएको छ ।
पहिरोका कारण चितवनको नारायणघाट–मुग्लिङ सडक खण्ड फेरि बन्द भएको छ । चारकिलो र पाँचकिलोमा पहिरो खसेकाले शुक्रबार बिहानैदेखि उक्त सडक खण्ड बन्द भएको स्थानीय प्रहरीले जानकारी दिएको छ । तस्बिर : सामाजिक सञ्जाल
Prevपाथिभरा माताले सबैको मनोकांक्षा पुरा गरुन, असार १९ गते शनिबार, आज तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल
Nextछ माया छपक्कैकी अभिनेत्री सुपुष्पाले आफ्नो प्रेमीसँग सुटुक्क गरिन विबाह, तस्विर भाइरल
……त्यसपछि लक्ष्मीप्रसादले आफूलाई जन्मदिने आमाको किरिया समेत नगरि हिँडे